Shiinaha Zmte Duudduubay Duubista tuubada Haydarooliga & Warshad | Topa
Rakibidda tubbo Haydarooliga
Rakibidda Metric Haydarooliga
Rakibidda Haydarooliga Ingiriiska
Rakibidda Haydarooliga Mareykanka
Hal Piece tubbo suurawdo
Rakibid Haydarooliga dib loo isticmaali karo
Adapter Haydarooliga Metric
Adapter Haydarooliga Ingiriiska
Adapter Haydarooliga Mareykanka
Mashiinka Tuubada Haydarooliga
Qalabka PCgun Airgun
Zmte Duubtay tuubada haydarooliga
Qaab No.: R15
Waxyaabaha: Silicone Rubber, PP
Awoodda: Tuubada Rubber Tuubada Heat-u adkaysta
Midabka: Madow, Madow / casaan / buluug / jaalle
Heerkulka: -30 Ilaa 90 Degree
Dhererka: 2m / 50m Ama Sidaad Rabto
Lambarka Moodalka: Ballaca kala duwan
Tubbo habboon: 8-10 Mm Ballaca Dibedda
Gudaha Gudaha: Saliida U Adkaysta
Isticmaalka: Ilaali tuubada
Shahaadada: ISO9001: 2008
Magaca: Qiime dhimis tubbo Haydarooliga
Baakadaha: kartoon iyo kiish alwaax ah
Wax soo saarka: Ningbo, Shanghai, Tianjin
Gaadiidka: Badweynta, Berriga, Hawada, DHL / UPS / TNT
Kartida Bixinta: Ningbo, Shanghai, Tianjin
Shahaadada: Haydarooliga tubbada ISO
Dekedda: Ningbo, Shanghai, Tianjin
Sicir-dhimis duug ah 'Zmte' Tubbo Haydarooliga
Qiime dhimista tuubbada Haydarooliga waxaa inta badan loo adeegsadaa taakuleynta hidda-shidaalka, baaritaanka saliidda, oo ku habboon dhismaha injineernimada, gaadiidka wiishka, been-abuurka metallurgy, qalabka macdanta, maraakiibta, mashiinnada wax lagu duro ee mashiinka, mashiinnada beeraha qalabka mashiinnada kala duwan.
Qiimo dhimis tuubada Haydarooliga - Tuubada Gudaha
Substratum of caag synthetic adkaysi u saliidaha.
Qiimo dhimis tuubada Haydarooliga - Xoojinta
1 aroosadda birta adkaysata badan, 2braide sidoo kale waxay leedahay xoojinta siligga afar-geesoodka ah
Qiimo dhimis tuubada Haydarooliga - Daboolid
Caag-gacmeedka madow ee u adkaysta xoqidda, saliidaha, shidaalka, ozonka, wakiilada hawada.
laga bilaabo -40 ° C illaa + 100 ° C
Aqoonsiga Hose Tubbo OD Cadaadis Shaqo Cadaadis Burst Radius Qaabka ugu Yar Miisaanka
inji mm mm Mpa Psi Mpa Psi mm kg / m
Qiimo dhimis tuubada Haydarooliga waxaa loo isticmaali doonaa in lagu gudbiyo dareeraha haydarka sida saliida haydarka, saliida shidaalka, saliidaynta, emulsion-ka biyaha, hydrocarbon iyo wiilka si loo qaado dareere cadaadis sareeya iyo haydarooliga isu badalaya mashruuca injineernimada oo heer kulkiisu yahay -40 ℃ ~ + 100 ℃.
Shirkaddayadu waxay leedahay qalab casri ah oo laga keenay Koonfurta Kuuriya, Finland iyo Talyaaniga, oo ay ku jiraan mashiinka muquuninta, mashiinka tidcan, mishiinka wax lagu farsameeyo iyo qalabka kale ee wax soo saarka muhiimka ah. Sidoo kale istaagga imtixaanka oo qarxa, istaaga tijaabada kacsiga iyo aaladaha kale ee baaritaanka sare.
Waxaan soo saarnaa badeecado la kulma SAE iyo DIN heerarka caalamiga ah oo tayo sare leh. Alaabada waxaa loo iibiyey beero kala duwan oo ay ka mid yihiin meelaha saliida laga qodo, warshadaha macdanta, metallurgy, injineernimada, iyo mashiinada Qaybo ayaa loo dhoofiyay America, Russia, Canada, Argentina iyo dalal kale oo badan.
Xirmada guud ee discount tuubada Haydarooligawaa bac ama bac lagu tolay oo leh santuuqa hoosta tuubada, oo hoos ka daawo. Waxaan, si kastaba ha ahaatee, waxaan sidoo kale bixin karnaa xirmo gaar ah sida ku xusan codsiyada macaamiisha.
Kuweena discount tuubada Haydarooliga waxaa loo soo saaray si adag iyadoo la raacayo heerka qaranka.
Isticmaalka caag tayo sare leh, safka gudaha ayaa leh hawo mareenka wanaagsan, daboolkuna wuxuu leeyahay kuleyl badan oo u adkaysta waxqabadka anti-gabowga.
Lakabka xoojinta waxaa laga sameeyaa tolida (ama mataaneynta) dunta caarada oo leh awood sare.
Heerkulka shaqada: -40 ℃ -160 ℃
4. Heerka La Dhigay: GB / T25
5.waa deegaan, cidna wasakheyn deegaanka.
6.Hesho waaxda Teknoolojiyadda,
7. aqbal OEM
8.Sample iyo amarka tijaabada ayaa la heli karaa
1. OEM ma la heli karaa?
Haa, OEM waa la heli karaa. Waxaan haynaa naqshadeeye xirfadle ah oo kaa caawiya kor u qaadista sumaddaada.
2. Sambalka ma la heli karaa?
Haa, shaybaarro ayaa diyaar kuu ah si aad u tijaabiso tayada.Haddii aan tijaabooyin ku hayno bakhaarka, xamuulka waxaa bixin kara dhinacaaga
3. Ma waxaad tahay Soo-saare?
100% soo saaraha, Soo dhawow waxaad booqataa khadka wax soo saarkeena.
4.Waa maxay waqtigaaga caadiga ah ee lacag bixinta ee amarada?
T / T 30% sida dhigaalka, iyo T / T 70% dheelitirka oo la bixiyay ka hor inta aan la xirin.
Ama xilli bixinta kasta oo laga wada hadlo.
Sidee Naloola Soo Xiriiri karaa?
Raadinta Sicir-dhimis Haboon Haydarooliga Soo-saaraha & alaab-qeybiyaha Waxaan haynaa xulasho ballaaran oo qiimo aad u fiican ah si aan kaaga caawino inaad hal-abuur yeelato. Dhammaan Zmte Discount Hydraulic Hose waa tayo leh dammaanad. Waxaan nahay Shiinaha Asal ahaan Factory of duubnaa dhimis Haydarooliga tubbo. Haddii aad qabtid wax su'aal ah, fadlan si xor ah ula soo xiriir.
Qaybaha Wax soo saarka: Tuubada Haydarooliga
Hore: Iftiimiya 300om 25mm manometer kombaresarada PCP
Xiga: 16711 Qalabka ahama tuubada birta ee birta ahaanta leh
Qalabka isku xidhka tuubada qalabka korontada ku shaqeeya ee Haydarooliga
Rubber tubbada jilicsan tubbo tubbo Haydarooliga iyo ...
Line shidaalka cadaadis sare caag tubbo Haydarooliga p ...
Ahama hydrauli cadaadis sare dabacsan ...
Heerkulka Sare Tuubbo caag oogada oogada ah
Cadaadis sare oo caag ah oo jilicsan tuubo tuubbo tuubbo ah
Dabaqa 12aad, Dhismaha dhexe ee Bariga Dunida Cusub, No.118 Zhongshan Road, Shijiazhuang, Gobolka Hebei, Shiinaha, Shijiazhuang, Hebei